Intsingiselo "Yokuqinisekisa" ngesiNgesi
Igama elithi "ukuqinisekiswa" lithetha ukuba uthetha into into. Ngokongezwa, ngegrama yesiNgesi , isitatimenti sokumisela sisisigwebo okanye isimemezelo esifanelekileyo. Isitatimende sokuthi sinokuthi singabhekiselwa kwisigwebo esisisigxina okanye isiluleko esiqinisekisayo: "Iinyoni zihamba," "Iirbits zigijima," kunye "neentlanzi zihamba" zizo zonke izivakalisi ezingqinelanayo apho izifundo zenza into ethile ngenzondelelo, ngokwenza isiteti esihle malunga isibizo esihambayo.
Igama eliqinisekisiweyo okanye isivakalisi ngokuqhelekileyo lichasene nesivakalisi esibi, esiqhelekileyo siquka inxalenye encomekileyo "ayikho." Imizekelo yeengxelo ezimbi zibandakanya: "Iingcambu aziboni" kwaye "Abantu abafaki." Isivakalisi esiqinisekisiweyo, ngokuchaseneyo, sisitatimende esiqinisekisayo kunokusilahlela isiluleko.
I-Sri Exhortatio n, indawo ye-YouTube yolwazi, ibhala ukuba igama eliqinisekisiweyo, ibinzana, okanye isivakalisi:
"... isetyenziselwa ukubonisa ubungqina okanye inyaniso yesigqibo esisiseko, ngelixa ifomu elibi libonisa ukunyaniseka kwaloo mzekelo." Izibonelo zezi zivakalisi, 'UJane ulapha' kwaye 'uJane akalapha.' Iyokuqala iyomeleza, ngelixa okwesibini kuphazamisekile. "
Igama elithi "liqinisekisi" liyisigqibo. Ichaza into ethile. Dictionary.com ichaza ubungqina bokuba:
"ukuqinisekisile okanye ukuvuma; ukuqinisekisile inyaniso, ukuqinisekiswa okanye into ethile.
ukuvakalisa isivumelwano okanye imvume; ukuvuma
ezintle, kungekhona "
Le nkcazo inokubonakala ibonakala ilula, kodwa ezininzi zezivakalisi kweli nqaku ziyi-statements statement (affirmative statements) ziqinisekisa ukuba iziphakamiso umbhali uzisa ngazo. Akumangalisi ukuba izivakalisi eziqinisekisileyo zenza isiNgesi esikhulu.
Ukusebenzisa izivakalisi eziqinisekileyo
Nangona kungabalulekanga ukuhambisa ingcamango ecacileyo, kuya kuba yinto engafanelekiyo ukuba uthetha ngeemvakalisi ezimbi kuphela, ufike kwindawo ethile ngokukhanyela zonke ezinye iindlela-njengokuthi, "Lo mntu akayinkwenkwe," xa uthetha , intombazana, okanye "indlu yesilwanyana ayiyintaka, i-reptile, intlanzi, okanye inja" xa uthetha ukuba yinkati.
Ukusebenzisa okungalunganga kwezi meko kuhambisa izivakalisi; Kungcono ukuzenza nje iingxelo eziqinisekisiweyo: "Intombazana," okanye "Indlu yezilwanyana iyinkati."
Ngenxa yoko, ezininzi izivakalisi zenziwa-njengale-njengento eqinekileyo, ngaphandle kokuba isithethi okanye umbhali ephikisana ngamabomu ngephupha okanye umbono. Ngaphandle kokuba uzama ukuthi "cha," isivakalisi sakho sinokuthi siqiniseke kwifom.
Okuthakazelisayo kukuba, ukulawulwa kwezinto ezingamabini ezi-2 kusebenza kwizivakalisi ezinqwenelekayo, oko kuthetha ukuba xa uthi, "andiyi ku-movie," isivakalisi sinqwenela ngenxa yokuba "ukungafuni" ukwenza into oyenzayo. into ethile.
Enye indlela yokucinga ngentsingiselo yesiqinisekiso okanye isigwebo esisisigxina ngokujonga umgaqo we- polarity . Ngeelwimi , ukuhlula phakathi kweefom ezintle kunye nezimbi zingabonakaliswa ngokuzenzekelayo ("Ukuba okanye kungekhona"), ngokuziphatha ("inhlanhla" ngokubhekiselele ku "ukungabi nantoni"), okanye ngokukodwa ("oqinileyo" kunye "nobuthathaka").
Ezi binzana zonke ziqulethe igama eliqinisekisiweyo okanye ibinzana kwaye lichasene, igama elibi okanye ibinzana. Inqaku elidumileyo kuMthetho 3, Isiqendu 1 somdlalo kaShakespeare, "i- Hamlet ," sifumana umxholo wecatshulwa ukuba ufanele ukuba khona (oya kuba ngummeli) okanye awukho (okuya kuba yinto engafanelekanga) .
Kwimizekelo yesibini, unokuthi: "Unethamsanqa," leyo iya kuba yinkcazo yokuqinisekisa, okanye "Akangenangqiqo," leyo ingaba yintetho engalunganga. Ngomzekelo wokugqibela, unokuthi, "Unamandla," unentsingiselo ebalulekileyo, okanye "Ubuthakathaka (akomelelekanga)," enegama elibi.
Ukuxhaswa ngokumelene neNgcaciso
I-Suzanne Eggins, encwadini yakhe, "Intshayelelo yeeLwimi eziSebenzayo zokuSebenza," inikeza umzekelo obalaseleyo obonisa intsingiselo yokubambisana, kunye nesimo saso esiphezulu, esibi:
Isiphakamiso into enokuphikiswa kodwa ixutywe ngendlela ethile. Xa sitshintshisisa ulwazi esiphikisanayo malunga nokuba kukho into okanye ayikho . Ulwazi luyakwazi ukuqinisekiswa okanye ukuphikiswa. "
Ezi ngxaki ziza kwinqanaba ekuqaleni kweli nqaku: Igama elichanekileyo okanye isitatimende kuthetha ukuba kukho into enjalo, ngelixa igama elibi okanye isitatimende-esichasene ne-polar-kuthetha ukuba into ayinjalo.
Ngoko, ngokuzayo xa uzama ukwenza ityala malunga nenkinga ethile okanye ukhumbule ukuba into yinyani, khumbula ukuba uvakalisa ingcamango eqinile: "UDonald Trump ungumongameli omhle," "Ungumntu onamandla," okanye , "Unomntu omhle." Kodwa, lungele ukukhusela isikhundla sakho ngokumelene nabanye abangavumelaniyo, kwaye beza kuthethwa ngento engalunganga: "UDonald Trump akayena umongameli omhle," "Akayena umntu onamandla," kwaye, "Unomlingana omncinane (okanye akukho). "U
I-Vocal Fry (i-Creaky Voice)
Ukufundisa Abafundi Abanobuchule Bomculo
Iingcebiso zokuLoba iPole Poke
Imfazwe Yomthonyama yaseMerika: iMfazwe yaseFort Henry
Umlando woMlando we-Afrika-weMerika: 1890 ukuya ku-1899
URudolf Diesel, Umthengisi weNjini yeDesel
Amaqela eVangeli aseMzantsi aphezulu
I-Hastings College Admissions
Isingeniso kwisihlahla seBhokisielder
I-5 Career Grand Slam Abaphumeleleyo kwiGoli yeGoda